Koobka kubada cagta ee Somaliska Sommarcupen | Somaliska
Bilowga bisha soo socota waxaan qabanqaabin doonaa koob loogu magacdaray “Somaliska Sommarcupen” kaasoo ay ku tartami doonaan kooxo Soomaaliyeed oo ka kala socda magaalooyinka Sweden ee ku dhow Stockholm. Koobkaan oo dhici doona 9-ka bisha Juni laguna qaban doono magaalada Enköping ayaa waxaa ka qeyb gali doona ugu badnaan 10 kooxood. Kubada ayaa lagu ciyaari doonaa goob hool ah.
Kooxaha ka qeyb galaya koobka ayaa waxaa waajib ah in ay isdiiwaan galiyaan ka hor 5 Juni. Shuruudaha looga qeyb galayo koobkaan ayaa ah.
1. In magaaladii ay matali doonto 1 koox oo keliya. Kooxda ugu horeysa ee isdiiwaan galisa ayaa la siin doonaa sharafta in ay matasho magaaladeeda.
2. Koox kasta waa in ay ka koobantahay ugu yaraan 7 qof iyo ugu badnaan 10 qof oo ay ku jiraan badalka iyo tababaraha. Ciyaartoyda waa in ay la yimaadaan dhar isku midab ah iyo kabaha hoolka. Ciyaartoyda waa in aysan da’dooda ka yaraan 18 sano.
3. Kooxda ka qeyb galaysa waa in ay bixisaa lacagta ka qeyb galka oo ah 600kr.
4. Kooxdu waa in ay leedahay qof masuula ah oo hogaanka u haya.
Saacada la bilaabi doono iyo goobta dib ayaan ka soo sheegi doonaa. Kubada ayaa socon doonta ugu badnaan 8 saacadood. Haddii aad doonayso in aad kooxdaada diiwaan galiso, fadlan email u soo dir magacaaga iyo telefoonkaaga. jimcale@somaliska.com anaga ayaa kula soo xiriiri doona.
Ujeedada loo qabanayo koobka waa isbarashada iyo isfahanka dhalinyarada Soomaalida.